Graffiti manaitra an'i Odeith sy ny 'aloky 3D' | Famoronana an-tserasera
Graffiti 'aloka 3D' mahavariana an'i Odeith
La fahalalahana anananao Amin'ny alàlan'ny fandokoana graffiti ho an'ny toerana nandokoana azy, dia afaka manolotra tombony sasany ho an'ireo mpanakanto mahita ny lamba farany tsara ampiasaina amin'ny rindrina. Ireo habaka ireo dia mety ho rindrina na ampahany amin'ny trano nilaozana izay mety ho tonga lafatra amin'ny vinavin-javakanto izay misy ny fahatsapana lalina na 3D aza.
Izany no mitranga amin'ny zavakanto ao amin'ny graffiti an'i ODEITH, mpanakanto Portiogey afaka mamadika rindrina telo amin'ny habaka telo-habe izay ahitantsika andiana sary hosodoko izay toa mivoaka avy eo amin'ny rindrina hisosa amin'ny alàlan'ny fahitantsika amin'ny fomba iray hamitahana antsika amin'ny alàlan'ny famoahana vokatra tena manaitra.
Tena mahavariana ity fahaizana manova habaka ity ary ny fifangaroan-javatra samihafa amin'ny sary, satria mety ho voalavo iray hafa misarika sary miaraka amin'io vehivavy io, miaraka amina endrika tena hyper-realistic, dia mitarika antsika hisafotofoto ilay sehatra alohan'ny ahitantsika ny tenantsika.
Manana an'i Odeith sanganasa marobe toy ny sary hosodoko izay ahitantsika fahasamihafana lehibe sy talenta lehibe amin'ny sary hosodoko araka ny hitanao rehefa mandany fotoana hijerena sary an-tsary ny sary an-drindrina na graffiti tsirairay izay mifindra any amin'ny vazan-tany samihafa eran'izao tontolo izao ianao.
Mpanakanto 40 taona teraka tany Damaia, Portiogaly, izay nanana ny tsifotra fanasitranana voalohany nataony tamin'ny tapaky ny taona 80, ka tamin'ny taona 90 dia nanomboka ny asany tamin'ny maha-mpanakanto graffiti azy mandraka androany izay ahafahantsika mankafy ny fomba manokana amin'ny fomba fijery sy manaloka ilay anarana mitovy amin'ny «aloky ny 3D». Ao anatin'izany, ny firafitra, ny sary na ny saripika, miampy izay hafatra, dia mifangaro eo amin'ny realisme sy ilay fikitika manokana voalaza etsy ambony.
Manana ny tranonkalanao ianao avy amin'ity rohy ity. Mpanakanto iray hafa mitady lalina amin'ny asany, na dia amin'ny fomba hafa aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Graffiti 'aloka 3D' mahavariana an'i Odeith
Mombamomba ny Instagram izay hampirisika ny fahaizanao mamorona
Vaporwave style graphic ho hetsika maoderina sy ankehitriny